Angamanani zokufikela yaseYurophu nendlela yokuzifumana Kukhona | Gcina A Isitimela
ekhaya > Uloliwe iTurkey > Angamanani zokufikela yaseYurophu nendlela yokuzifumana Kukhona
Iindawo ezingabizi kakhulu zaseYurophu zisisihloko eshushu. Okokuqala, abatyeleli e Europe uyakwazi ukubona yonke into kwi enkulu iivenkile zekofu ukuba esimhlophe amahle. Ngenxa yokuba izixeko ezifana Venice, eRoma, yaye Paris izigidi yokuhamba abakhenkethi eYurophu minyaka le. Siye wadala uluhlu zawo ezingqongileyo zibiza yaseYurophu ukuba abafundi bethu. Olu luhlu lubandakanya indlela yokufika ngololiwe.
Porto, Portugal u zokufikela zethu lokuqala Lixabiso European
Inkoliso ephawulekayo Porto kwalo’ iiwayini amangalisayo. Oku kwiindawo Lixabiso Europe ulwandle yaseYurophu mini-ingumasipala. Porto mkhulu amasiko ngokufanayo kulungile ukuba abantu abathanda ukuhlala ngaphandle. olondolozo lwembali kunye izakhiwo yokufikela cheap European baphezulu. ngokuqinisekileyo, indawo kutyelela.
Indlela ngendlela ukufumana ku Porto xa Sao Bento kwisikhululo ngololiwe ukungena Gcina A Isitimela.
Seville sisixeko wabeka-umva. Nandipha i ziyalala kwemini. yamaJuda, UmKristu, kunye nenkcubeko yamaSilamsi. Kutyelela amabandla zamandulo kwaye ghettos kulo mhla. Le ukutya okumnandi, ingakumbi Tapas. Le uchaze guitar umculo kwi izitrato ithumba emoyeni, ukuyekelela Seville. Oku Lixabiso zokufikela yaseYurophu sixeko mhlawumbi the best charm eYurophu yaye ubutyebi bembali.
Kuba izikhombisi kunye namaxabiso ngendlela ukuze ku Seville santa Justa kwisikhululo sikaloliwe ukubona Gcina Uloliwe site.
Valencia uye 3 esimhlophe gorgeous. Nje ngeziphumo, inemisebenzi emihle yangaphandle. A Lixabiso park kazwelonke European yi indawo okukhulu nokunyuka. Indawo ekufutshane neLaufufera National Park yindawo enkulu nokunyuka. Foodies nani nithandane Valencia ngenxa yayo imveliso entsha.
Indlela ngendlela ukufumana ku Valencia xa Station North isikhululo sikaloliwe ngenisa Gcina iwebhusayithi yoLoliwe.
Istanbul, ETurkey kwelinye yethu yokugqibela cheap European
Enye isixeko amazing kwaye cheap yi Istanbul. Ngokuba likomkhulu Turkish idibanisa Europe and Asia. Rich ngelifa, izakhiwo elihle, kunye nemimandla engaqhelekanga. I-Skylines yekhaya kunye nolwandle oluhle oluhlaza oluqhutywa ecaleni kweIstanbul. Lo mzi mkhulu ngokuba izivamvo ezineendaba ezimangalisayo, Ivumba, kunye nezandi kwikomkhulu. Ukutya ethandwayo nanku kebab doner kwaye ephatha sweet Turkish ukuba ingaba ezithengwe kwi ezitratweni. Zonke ezi nkcukacha zingentla kufunyanwa kuzo amanani ezifanele kakhulu
Ukufumana izikhombisi-ndlela ngendlela yokufika kwiSitishi i-Sirkeci sase-Istanbul yiya kwi Gcina iwebhusayithi yoLoliwe.
Incwadi uhambo lwakho olulandelayo ngololiwe nathi
Ngaba uceba uhambo oluya kwiindawo ezingabizi kakhulu zaseYurophu? Kutheni ukuthatha 3 imizuzu ukuze ufumane uhambo engambi uloliwe. Ngena kwi website yethu ngoku kwaye ufumane linikeza best, fast and kulula. Siyavuma zonke iintlobo ezinkulu kwentlawulo.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcheap-european-destinations%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml kwaye bangatshintsha / nl ukuba / uyeke okanye / ru kwiilwimi ezininzi.
tips uloliwe train Travel travelportugal indawo yokuhamba ikarikuni